माया के हो ? हामीलाई किन आवश्यक पर्छ मायाको ? जान्नुहोस् (मनछुने भिडियोसहित) - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / माया के हो ? हामीलाई किन आवश्यक पर्छ मायाको ? जान्नुहोस् (मनछुने भिडियोसहित)
माया के हो ? हामीलाई किन आवश्यक पर्छ मायाको ? जान्नुहोस् (मनछुने भिडियोसहित)
माया दुई अक्षरले वनेको शब्द हो । जहाँ संसार अटेको हुन्छ । नत यसलाई हेर्न सकिन्छ, न देख्न सकिन्छ, नत समात्न नै सकिन्छ केवल मात्र महसुस् गर्न सकिन्छ । जब मानिसहरु महसुस् गर्ने शव्द खोज्न थाल्छन् । तब एकान्तमा आफै हराउछन् ।
मायामा मान्छेहरु पागल हुने गर्छन् भने कोहि मायामा बाचिरहेका हुन्छन् । भनिन्छ, जाने अमृत हो नजाने विष हो । यो फिक्का दुनियाँमा मायाको आभासले गर्दा यो संसार मंगमगाई रहेका छन् । माया शब्द नभएको भए सायद यो संसार फिक्का हुन्थ्यो होला ।
विभिन्न युगमा विभिन्न विद्वानले मायाको परिभाषा आ-आफ्नो तरिकाले दिएका छन् । जति मायाको परिभाषा बुझ्दै गयो त्यति यो मायाको गहिराइले हामीलाई डुबाउँदै जान्छ । मानिसहरूले भने झै माया नि:स्वार्थ छ भनौ भने माया स्वार्थ पनि भेटेको छु । प्रेममा छलकपट हुँदैन भनौ भने छलकपट गर्नेको लामै लाइन देखेको छु ।
माया ले नै कति को जीवन एकदमै राम्रो बनाई दिएको छ । तर कति को जिन्दगी नै बर्बाद पारी दिएको छ । यतिसम्म कि उनीहरु ले आत्महत्यासम्म गरेका छन् । बिचराहरु माया पाएपछि संसार नै जितेको ठान्छन । तर फेरि यसवाट धोका खाए पछी संसार वाटै हारेको महसुस गर्छन, अनि आफ्नो जिन्दगी नै बर्बाद पर्छन ।
उनीहरु आफ्नो जिन्दगी त् बर्बाद पर्छन, तर परिवारमा पनि धेरै नि चिन्ता पारी दिन्छन । माया प्रेम नै जीवनको पूर्णता हो । तर माया को साथैसाथै घृणा पनि यो जगतको शृष्टिसँगसँगै आएको भावना वा स्वभाव हो । त्यो स्वभाव पनि सबैमा हुन्छ तर घृणा हामीले केवल असत्य र अन्यायलाई मात्रै गर्नुपर्दछ ।